Filed under: ဗဟုသုတ, သမိုင်းအစအန —7Comments
“All the way Saviour Leads me”
>အင်း..ရှေးလူတွေကို နောက်လူတွေ မမှီတော့ ဘူးလို့ ပြောနေသံတွေကတော့တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားနေရတာကြာပါပြီ။နယ်ပယ်အရပ်ရပ်မှာ ဖြစ်နှိုင်ပေမဲ့ဗမာပြည်မှာတော့ မှီနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်နော်..။အမေစု လေ..၊
>အခုမှ ကြားဖူးတာအမှန်ပဲ။ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
>မသိသေးတာတွေ သိလိုက်ရပါတယ်.. ပိုစ့်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါတကယ်ကို ဗဟုသုတရပါတယ်..
>ဒေါက်တာရှောလူအကြောင်း နဲနဲတော့ကြားဖူးတယ်…။ခုမှ သေသေချာချာသိရတာ…။ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျိုး..။မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ….။
>သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါ…။ တော်တော်များများ သိပ်မသိကြတဲ့ ဗဟုသုတစာတွေကို တင်ပေးလို့ အားလုံးကိုယ်စားကျေးဇူးတင်မိပါတယ်…ကိုချမ်း…။ခင်တဲ့မိုးငွေ့
>သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က လင်.ခ် ပေးလို. ရောက်လာတာပါ။တကယ်ကောင်းတဲ. ပို.စ်ပါ။ နောက်လဲ လာဖြစ်တော.မယ်ထင်ပါရဲ.။အားပေးလျှက်။